Ogaden News Agency (ONA) – Shirka Baarlamaanka Yurub oo Lagaga Hadli Doono Xuquuqda Haweenka Ogadenya iyo Dhibaatada ay Itobiya ku Hayso
Shirka Baarlamaanka Yurub oo Lagaga Hadli Doono Xuquuqda Haweenka Ogadenya iyo Dhibaatada ay Itobiya ku Hayso
Posted by ONA Admin	/ January 26, 2015
Shirkan oo loogu baaqay dadweynaha ay quseyso inay kasoo qaybgalaan ayaa waqtigii loo qabtay is-diiwaan galinta ay ku egtahay maalinta Arbacada ah saacada marka ay tahay 12:00 Duhurnimo. Sidaa darteed ayaa loogu baaqaya jaaliyadaha Yurub ee gaadhi kara goobta uu shirka ka dhacayo oo ah Xarunta Baarlamaanka Yurub ee Brussels/Belgium inay is-diiwan galiyaan.
Ururka Unrepresented Nations and Peoples Organization (UNPO) ayaa ku qabanaya goobta uu shirka ka dhacayo dood ay cinwaan uga dhigeen -Xuquuqda Haweenka Qawmiyadaha Tiradayar iyo Cadaabka Itobiya – (Minority Women’s Rights – An Ethiopian Inferno). Doodan ayaa dhacaysa maalinta Arbacada ah ee 4ta Bisha Feberayo 2015 saacadda marka ay tahay 3:00 Galabnimo ayuuna bilaabanayaa. Waxaa shirkan isla qaban qaabiyay UNPO iyo Jabahdda ONLF, waxaana martisharaf ka ah oo ka hadli doona Marwo Ana Gomes MEP iyo Mudane Julie Ward MEP. Ujeedada shirka waa in lagu baraarujiyo caalamka xaaladda sii xumaanaysa ay ku sugan yihiin qawmiyadaha laga tira badan yahay dalka Itobiya, gaar ahaan dalka Ogadenya, halkaasoo ay ku tilmaameen in Haweenka Ogadenya lagu hayo dhibaato xoogan oo Itobiya ay kula dagaalamayso shacabkaa dhibaatada ay ku hayso haweenka.
Inkastoo Dastuurka ay qorteen kooxda EPRDF ay ku xardheen xuquuqda aadanaha oo waliba si gaar ah loogu xusay dadka laga tirabadan yahay xuquuqdooda in la ilaalinayo, hadana xaaladda ay ku sugan yihiin dadka laga tirabadan yahay Itobiya ayaa ah mid laga dayrinayo. Waxaa si gaar ah looga dayrinayaa xaaladda ka jirta Ogadenya oo dadka dagan ay ka duwan yihiin Itobiya xag dhaqan, af iyo diinba, taasoo keentay in si gaar ah loo takooro oo ciidanka Itobiya ay ka wadaan xad gudub baahsan oon aabayeel lahayn, taasoo loo baahan yahay in caalamka la gaadhsiiyo.
Dhibaatada ugu badan Ogadenya waxay ku dhacdaa dadka nugulka ah oo ka kooban haweenka iyo caruurta, waxaana laga soo sheegayaa dil sharcidarra ah, kufsi iyo xadgudubya kala duwan oo caalamka intiisa kale laga qarinayo. Dhibaatoyinkan ayaa loo gaystaa dadka shacabka ah si loo ogolaysiiyo gumaysiga Itobiya ama looga aargoosto dadka shacabka ah marka uu dagaal ku dhex maro aagooda ciidanka Itobiya iyo ciidamada ONLF.
Waxay warbixinada la hayo sheegayaan in ciidanka Itobiya ee jooga Ogadenya iyo maleesiyaadka la socota lagu tababaro habka ugu xanuunka badan ee loo ciqaabo dadka shacabka ah, waxaana ka jira Ogadenya Xad-gudub baahsan oo Xuquuqda Aadanaha meel lagaga dhacayo.
Magacyada dadka ka hadli doona shirka ayaan dib kasoo qori doonaa, inta ka horeysa waxaa laga codsanayaa kazoo qay-galayaasha inay iska diiwaangaliyaan halkan: register here.
Hadaad dhib kala kulanto waxaad la xidhiidhaa cinwaankan : joost@unpo.org
Faafaahin dheeraad ah Riix Halkan: UNPO report.